Ziningi izingqinamba ezihlonzwe isekela Ngqongqoshe livakashele emahhovisi omnyango wezasekhaya eMgeni. – Sivubela intuthuko Newspaper
Ziningi izingqinamba ezihlonzwe isekela Ngqongqoshe livakashele emahhovisi omnyango wezasekhaya eMgeni.
Iphini lika Ngqongqoshe wezasekhaya u Mnu Njabulo Nzuza nezikhulu zakwa Home Affairs ose Mgeni
Iphini lika Ngqongqoshe womnyango wezasekhaya u Mnu Njabulo Nzuza ugasele kungazelele emahhovisi omnyango wezasekhaya ku Mgeni Road mhla zingu 08 ku Julayi 2019 ukuzohlola isimo sokusebenza kulamahhovisi.
U Nzuza uthe kuningi okusamele kwenziwe kulamahhovisi ukulungisa izingqinamba abantu abasuke bezofuna kuwo usizo ababhekana nazo usuku nosuku. Ulayini omude wabantu abasuke bezokwenza omazisi yiyo ingqinamba enkulu abantu abahambela kulamahhovisi ababhekana nayo. U Nzuza uthe basezinhlelweni zokwethula ubuchwepheshe besimanje ezikhungweni zomnyango wezasekhaya.
“Ekuhambeleni kwethu kulamahhovisi sihlonze izinkinga eziningi, kodwa okuyiyona egqame kakhulu eyolayini abade kakhulu. Sithole ukuthi kunabantu asebekhulile abalokhu befike ngezithuba zehora lesithathu ekuseni abangakasizakali namanje. Sisezinhlelweni zokwethula uhlelo lobuchwepheshe besimanje, lapho kuzoba lula ukusebenza komnyango wezasekhaya. Lena inkinga ekade yaba khona besisalokhu sicubungula izindlela zokuyixazulula, ngingakuqinisekisa ukuthi kwisabelo mali somnyango wezasekhaya sizobeka isamba semali esizokwelekelela ukusheshisa uhlelo lokwethulwa kobuchwepheshe,” kusho u Nzuza.
Echaza ngokuhambela kwabo kula mahhovisi, uNzuza uthe inhloso wukuzozibonela mathupha izinkinga umphakathi obhekene nazo. Uqhube wathi bazothatha umbiko bayowucubungula ukuze bezokwazi ukuqhamuka nesisombululo esishaya esikhonkosini.
“Asimenywanga ukuba size kula mahhovisi, sikhethe ukuthi sitheleke singalindelwe ukuze sizobona ngokuphelele ukusebenza okwenzeka usuku nosuku. Inhloso ukuthi sithole umbiko unjengoba unjalo ukuze sikwazi ukwakhela kuwona kuqhamuke izisombululo zezinkinga lo mnyango obhekene nazo, sizimisele ukuba uhulumeni owethembekile kubantu yingakho kumele siqale ngokuzwa izikhalo zabo ngaphambi kokuthatha izinqumo,” kuchaza u Nzuza.